အယ်ဒီတာအဖွဲ့ ▷➡️ VidaBytes | LifeBytes
LifeBytes AB အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ website တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကအကြောင်းအကြောင်းကြားသည်။ နည်းပညာ၊ ဂိမ်းများနှင့် ကွန်ပျူတာလောကအကြောင်း သတင်းများ၊ သင်ခန်းစာများနှင့် လှည့်ကွက်များ. အကယ်၍ သင်သည် နည်းပညာကို နှစ်သက်သူဖြစ်ပါက သင့်သွေးပြန်ကြောများမှတဆင့် သွေးစီးဆင်းနေပါသည်။ နည်းပညာ ထို့နောက် Vidabytes.com သည် သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာဖြစ်သည်။
၎င်းကို 2008 ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့ချိန်မှစ၍ VidaBytes သည် ကဏ္ဍရှိ အဓိကဝဘ်ဆိုဒ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာသည်အထိ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြီးထွားလာမှုအား မရပ်တန့်ခဲ့ပေ။
VidaBytes အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများ။ သငျသညျအစအသင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိုလျှင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် အယ်ဒီတာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားဤပုံစံကိုပို့ပါ.
ကြော်ငြာနှင့် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ။ စဉ်ဆက်မပြတ်သင်တန်းများတွင် programming ကိစ္စရပ်များ။ ယနေ့ခေတ် နည်းပညာလောကတွင် ဝန်းရံထားသည့်အရာအားလုံးကို သင်ယူခြင်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးကို ပထမဆုံးစကိုင်တုန်းက ကျွန်တော့်အသက် 18 နှစ်ပါ။ အရင်ကတော့ ကစားဖို့အတတ်နိုင်ဆုံး အသုံးမချခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အသုံးပြုသူအနေနဲ့ ကွန်ပြူတာပညာရပ်ကို စတင်လေ့လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အနည်းငယ်ကွဲသွားတာတော့ အမှန်ပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့ခေတ် အရေးကြီးတဲ့ ကုဒ်တွေ၊ ပရိုဂရမ်းမင်းနဲ့ တခြားအကြောင်းအရာတွေကို ကြိုးစားလေ့လာရမှာကို ကြောက်စိတ်တွေ ပျောက်သွားစေတယ်။
VidaBytes ၏ အထွေထွေရေးသားမှုအဖွဲ့၏ ပရိုဖိုင်။
Update Today သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က VidaBytes တွင်ဝင်ရောက်ခဲ့သော ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် စနစ်များ၏ကမ္ဘာအတွက် ရည်ရွယ်ထားသော ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အကြောင်းအရာအားလုံးကို ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ကွန်ပျူတာပညာရှင် အလုပ်သင်။ ကွန်ပြူတာစနစ် ကျောင်းသားသည် နည်းပညာအကြောင်း အဆင့်ဆင့်လေ့လာရန် စိတ်အားထက်သန်စွာ ကူညီပေးသည်။
Redesenred သည် Vidabytes.com ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော Networks နှင့် Computers များအကြောင်း ဟောင်းနွမ်းသောဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။